China I Beige Cotton Brocade China Manufacturers & Suppliers & Factory
I Beige Cotton Brocade - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-I Beige Cotton Brocade)
I-Beige Colour Comfortable uJacquard
I-Elegant and Mysterious Red Floral Cotton Chantilly Lace ilethe umkhuba omusha emhlabeni wezemfashini, ophinde ulethe amathuba angenamkhawulo wobuhle bokugqokwa kwabesifazane. I-Red Cotton Corded Lace yethu eyenziwe nge-100% ye-nylon, futhi ilula kakhulu futhi inciphile, ilungele kakhulu ukugqoka kwabesifazane...
I-Elegant ne-Mysterious Beige Corded Lace Chantilly Eyelash Lace ilethe umkhuba omusha emhlabeni wefashini, ophinde ulethe amathuba angenamkhawulo wobuhle bokugqokwa kwabesifazane. Umucu wethu wentambo we-beige wenziwe nge-100% ye-nylon impahla, futhi ilula kakhulu futhi inciphile, efaneleke kakhulu ngokugqoka...
Indwangu eluhlaza okwesibhakabhaka ekhanyayo ye-Blue Brocade Jacquard Textile
Indwangu eluhlaza okwesibhakabhaka ekhanyayo i-Light Blue Brocade Jacquard Textile isuselwa kuphethini elihlanganisiwe lapho izindwangu zihlanganiswa phakathi kwe-warp ne-weft. Amaphethini amahle ahlukahlukene anjengezimbali, izinyoni, izinhlanzi, izinambuzane nezilo, njll. Angalulwa ngendwangu ye-jacquard. Izinto...
Indwangu eluhlaza okwesibhakabhaka ye-Blue Navy Jacquard Brocade
Indwangu eluhlaza okwesibhakabhaka ye-Blue Navy Flower uJacquard Brocade yakhiwe kusuka ephethini elihlanganisiwe lapho izindwangu zihlanganiswa phakathi kwe-warp ne-weft. Amaphethini amahle ahlukahlukene anjengezimbali, izinyoni, izinhlanzi, izinambuzane nezilo, njll. Angalulwa ngendwangu epinki yejacquard. Izinto...
Siyabonga ngentshisekelo yakho yeBlack Gold Double Kind Jacquard Brocade Fabric. Yikuphi eyenziwe nge-100% polyester nokuhlobisa ngayo. Le ndwangu yejacquard emnyama negolide ilungele ukugqoka, isudi, ijazi njll. Indwangu ye-Yanzi ingumkhiqizi ochwepheshe wendwangu ye-polyester jacquard, enesipiliyoni sebhizinisi...
Indwangu emnyama ye-Vantage Grey Black Jacquard Brocade
Siyakwamukela vakashela i-Yanzi Textile, singabakhiqizi bezokwakha indwangu yaseJacquard enesipiliyoni sebhizinisi esingaphezu kweminyaka engu-10. IJacquard yethu ihlanganisa i-flower iphethini jacquard, indwangu enamaphethini wejometri, indwangu yejacquard yensimbi nokunye. Lesi sitayela osibukayo yi-Vantage Grey...
Indwangu ye-Beige Brocade Fabric Jacquard Indwangu
Siyakwamukela vakashela i-Yanzi Textile, singabakhiqizi bezokwakha indwangu yaseJacquard enesipiliyoni sebhizinisi esingaphezu kweminyaka engu-10. IJacquard yethu ihlanganisa i-flower iphethini jacquard, indwangu enamaphethini wejometri, indwangu yejacquard yensimbi nokunye. Lesi sitayela osibukayo sisezingeni...
I Beige Cotton Brocade
I-Beige Cotton Brocade
I-White Geometir Cotton Brocade
I-White Flower Brocade